विचित्र संसार Archives - Page 20 of 20 - A complete Nepali news portal based on news & views
संसारभर शाकाहारी भए भने के हाेला त्यसकाे असर ?
१० असार २०७४, शनिबार १३:०८ June 24, 2017 Nonstop Khabar
संसारभरी जून १२ तारिखका दिन विश्व मासु मुक्त दिवस मनाइन्छ । यदि संसारभरीका सबै मानिस अचानक सधैंका लागि शाकाहारीका भए यसको असर के होला ? यहाँ हामी यसले जलवायु, वातावरण, स्वास्थ्य र अर्थव्यवस्थामाथि पार्ने असर बारे कुराकानी गर्दैछौं । यदि सन् २०१५ सम्म पूरा संसार शाकाहारी भए हरेक वर्ष ७० लाख कम मृत्यु हुनेछ र […]
१० असार २०७४, शनिबार १२:५१ June 24, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । आजकाल तपाईंले बजारमा नक्कली अर्थात् प्लाष्टिकको चामल आइरहेको बारे समाचारमा सुन्नुभएको होला जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने गर्दछ । जब तपाईंले नक्कली चामल देख्नुहुन्छ तब हेरेर नै उक्त चामल नक्कली हो कि सक्कली भन्ने बारे छुट्याउन सक्नुहुन्न । खबर साँचो हो वा झुटो प्लाष्टिकको चामलबाट टाढा हुनु नै राम्रो हो किनभने यसले […]
चीन किन डरायाे यी खेलाैनासँग ?
१० असार २०७४, शनिबार १२:४४ June 24, 2017 Nonstop Khabar
चीनमा आजकाल एक खेलौनाले बच्चाहरुमाथि जादू नै गरिरहेको छ । धनुष आकारको उक्त खेलौना आइसक्रिम स्टिकले बनाइएको छ । तर यो खेलौनाले चीनियाँ पुलिसलाई तनाव दिएको छ । चीनियाँ मिडियाका अनुसार चेंगडू, कूनमिंग र हारबीनजस्ता शहरमा यी खेलौनामाथि प्रतिबन्ध गरिएको छ । यसका साथै पुलिसले स्कूल नजिकै खोलिएका पसलमा छापा मारिरहेको छ किनभने खेलौना ‘खतरनाक’ […]
मृत्युसँग जोडिएका १० अनाैठा र डरलाग्दा तथ्य
१० असार २०७४, शनिबार १२:३४ June 24, 2017 Nonstop Khabar
एजेन्सी । मृत्यु जुनसुकै बेला, कुनै पनि रुपमा आउन सक्छ । संसारका कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मृत्यु कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बारे थाहा हुँदैन । आज हामी तपाईंलाई मृत्युसँग जोडिएका १० डरलाग्दा तथ्यबारे बताउँदैछौं जसबारे थाहा पाउँदा तपाईं आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । आफैंलाई खान थाल्छ शरिरः जिउँदो हुँदा हामी जे पनि खान्छौं त्यसलाई पेटमा रहेको […]
मुम्बइ, सपनाको शहर। यहाँ धेरैका सपनाले कोरेभन्दा बढी आकृति बनाएका छन्। तर, यहीँ नै कसैका सपनाहरू टुटेका छन् र साविकको जीवन बर्वाद पनि भएका छन्। यस्तै सपना टुटेर सडकमा आएकी एक पात्र हुन् मिताली शर्मा। कुनै समय मितालीको रूप र अभिनयले पाएको पाएको चर्चा अहिले आएर उनको दुःखले भरिएको निरश कथाले प्रतिस्थापन गरिदिएको छ। भोजपुरी […]
सभासदलाई बासी खुवाएपछि चमेनागृह बन्द
९ असार २०७४, शुक्रबार २०:०७ June 23, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौ, १ असार । संविधान सभा गृहमा रहेको चमेना गृह बन्द हुने भएको छ । सभासदहरुलाई गुणस्तरहीन र बासी खाना खुवाएको पुष्टि भएपछि संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरबार र संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरमा सभासदहरूका लागि सञ्चालित चमेनागृह बन्द गरिने भएका हुन् । यसअघि सभासदले नै खाना खाँदा वासी रहेको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि उक्त खाना खाद्य प्रविधि […]
बन्दुक छाडेर बङ्गुरपालनमा माओवादी नेता
९ असार २०७४, शुक्रबार १९:५९ July 12, 2017 Nonstop Khabar
पर्वत, २५ वैशाख । शिक्षकको स्थायी जागिर छाडेर सशस्त्र द्वन्द्वमा बन्दुक बोकेका माओवादीका एक जना जिल्ला नेता आजकल बन्दुक छाडेर बङ्गुरपालनमा लागेका छन् । पर्वतको सरौखोला गाविस घर भएका नेकपा–माओवादी पर्वतका पूर्व सेक्रेटरी जयनारायण तिवारी बन्दुक छाडेर व्यवसायिक बङ्गुरपालनमा लागेका हुन । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय पर्वतको सहकारी बङ्गुरपालन कार्यक्रममार्फत नेता तिवारीको अगुवाइमा पैयुँखोला बङ्गुरपालन सहकारी […]